स्वास्थ्यप्रति सचेत सहरिया : जिमदेखि जुम्बासम्म - Naya Patrika
स्वास्थ्यप्रति सचेत सहरिया : जिमदेखि जुम्बासम्म
नुनुता राई/नयाँ पत्रिका काठमाडाैं, २० माघ | माघ २०, २०७४
स्वस्थ एवं फिट शरीरका लागि सहरियाहरू जिमखानादेखि जुम्बा सेन्टरसम्म धाउन थालेका छन् । स्वास्थ्यप्रतिको चेतना बढेसँगै फिटनेस सेन्टरहरूमा मानिसको चाप मात्र बढेको छैन, घरघरमा योगाको क्रेज पनि चुलिएको छ । तारे होटेलदेखि टोलैपिच्छेसम्म खुलेका फिटनेस सेन्टरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म भिड देखिन्छ । जसलाई जतिखेर फुर्सद हुन्छ, त्यतिखेर नै एक्सरसाइजका लागि जान्छन् । काठमाडौंको प्रदूषित वातावरण र अस्तव्यस्त खानपिनले बिगारेको ज्यानलाई फुर्तिलो बनाउन र तन्दुरुस्त राख्न अपनाइने सहरिया विधिहरूबारे नुनुता राईले तयार पारेको रिपोर्टः
फिट शरीर र स्वास्थ्यका लागि जिम, योगा, जुम्बा, एरोबिक, मर्निङवाक जानेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । नियमित एक्सरसाइज गर्नेको कुनै निश्चित उमेर–समूह छैन । यसलाई स्वास्थ्यप्रति सचेतनाको प्रभाव मान्न सकिन्छ । केही वर्षअघिसम्म हुनेखानेहरू मात्रै जिम, योगा, जुम्बा, एरोबिक जाने मानिन्थ्यो । तर, अचेल त्यस्तो सोचाइ हराउँदै गएको छ । त्यसको मुख्य कारण स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना हो । जुम्बा तथा एरोबिक प्रशिक्षक दिलीप साउद भन्छन्, ‘आजभोलि कम्तीमा पनि दिनको एक घन्टा आफ्नो स्वास्थ्यका लागि छुट्याउने जमात बढ्दो छ ।’
बढ्दो प्रदूषण, धुलो, धुवाँका कारण दिनप्रतिदिन मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको छ । त्यसैले पनि केही समय आफ्ना लागि छुट्याउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुँदै गएको छ । तारेहोटेलदेखि टोलटोलसम्म फिटनेस क्लब खुलेका छन् । नेता, कलाकार, व्यापारी होस् वा समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति तारेहोटेलका फिटनेस सेन्टरमा भेटिन्छन् । फिटनेस क्लब नपुगेका स्थानमा विभिन्न समूह बनाई योगा गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । कतिपयले घरमै बसेर पनि योगा तथा अन्य एक्सरसाइज गर्ने गर्छन् ।
केही वर्षअघि सीमित रूपमा जिम, योगा, जुम्बा सेन्टर थिए । जसले गर्दा शुल्क महँगो हुने गथ्र्यो । दक्ष प्रशिक्षकको कमी थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । प्रविधिको विकाससँगै एक्सरसाइज गर्ने सामानहरू सहज तथा सस्तो हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा कतिपय आफ्नो घरमै सामान किनेर एक्सरसाइज गर्ने गर्छन् । सार्वजनिक व्यक्तिहरू विशेषगरी यस पंक्तिमा पर्छन् ।
आफूलाई लागेको रोगका आधारमा पनि एक्सरसाइजका क्याटागोरी फरक–फरक छन् । कुन रोग लागेका, कस्ता बिरामीले कुन एक्सरसाइज गर्न हुने र कसले नहुने भन्ने प्रशिक्षक, डाक्टरले सल्लाह दिन्छन् । त्यसकै आधारमा उनीहरू एक्सरसाइज गर्ने गर्छन् । लामो समयसम्म रोगले च्यापेका बिरामी एक्सरसाइजका कारण ठीक भएको वा केही कम भएको उदाहरण प्रसस्तै छन् । त्यसैले डाक्टरहरूसमेत बिरामीको प्रकृति हेरेर त्यस्ताखाले एक्सरसाइजका लागि सल्लाह दिने गर्छन् । लामो समयदेखि ढाड दुख्ने समस्या भएकी कमला देवकोटा योगा गरेपछि यो समस्या कम भएको
अनुभव सुनाउँछिन् ।
युट्युबमा हेरेर व्यायाम गर्नु गलत
प्रशिक्षक दिलीप साउदका अनुसार व्यायाम गर्न जानुअघि मानिसले उक्त सेन्टरबारे सामान्य जानकारी लिन थालेका छन् । संस्था दर्ता भएको छ वा छैन, प्रशिक्षक दक्ष छन् या छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन्छन् । दिलीप भन्छन्, ‘यसले मानिस आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कति सचेत हुन थालेका छन् भन्ने देखाउँछ ।’
धेरैजसो जिम, योगा, जुम्बा, एरोबिक गर्न दक्ष प्रशिक्षक हुने भन्दै फिटनेस सेन्टर नै जाने गरेका छन् । तर, कतिपय भने युट्युबमा हेरेर घरमै पनि गर्छन् । प्रशिक्षकहरू भने युट्युबमा हेरेर अथवा अरूले गरेको देखेर एक्सरसाइज गर्नु गलत भएको बताउँछन् । यसरी एक्सरसाइज गर्दा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘उल्टो प्रशिक्षण प¥यो भने यस्ता एक्सरसाइजले शरीरलाई बेफाइदा गर्छ,’ काठमाडौं स्कुल अफ योगाका प्रशिक्षक प्रेमानन्द शिव बस्याल भन्छन्, ‘जुम्बा, एरोबिक गर्दा तरिका नमिल्न सक्छ र त्यो नियमित त्यस्तै भए स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ । त्यसैले सकेसम्म फिटनेस सेन्टरमा नै गएर व्यायाम गरेको राम्रो ।’ कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भए त्यहीअनुसारको प्रशिक्षित गराइने भएकाले दक्ष प्रशिक्षककोमा नै एक्सरसाइज गर्नुपर्ने प्रशिक्षकहरू बताउँछन् ।
समस्या लिएर योगा सेन्टर जाँदा योग्य प्रशिक्षक रहेछन् भने योगा गर्न आउने व्यक्तिको समस्या सुल्झिन्छ । बस्याल भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्ति योगा गर्न जाँदा प्रशिक्षकले उक्त व्यक्तिको स्वास्थ्य प्रोफाइल नहेरी योगाको आसन सिकाउन हुँदैन, जसले उसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परोस् ।’ यसरी योगा सिकाउने योगा सेन्टर बढीमा ८ वटा मात्र भएको उनको दाबी छ । विश्वकै पहिलो योगा विश्वविद्यालय बिहार योग विद्यालयबाट योग मनोविज्ञानमा मास्टर्स गरेको दाबी गर्ने बस्याल नेपालमा योगा सेन्टरको संख्या मात्र बढेको, तर गुणात्मक स्तर भने ज्यादै कमसल भएको बताउँछन् ।
काठमाडौंमा ७ सय फिटनेट सेन्टर
नेपालमा एक्सरसाइज सिकाउन आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त प्रशिक्षक कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । उपत्यकामा सात सयभन्दा बढी फिटनेस सेन्टर भएको युनाइटेड फिट्नेस सेन्टरका प्रशिक्षक दिलीप साउद बताउँछन् । अहिले ट्रेनिङ सेन्टरहरू घरेलु उद्योग तथा कम्पनीमा दर्ता हुने गरेका छन् । जसले गर्दा यसको निगरानी हुन सकेको छैन । यी सेन्टरहरू विशुद्ध स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसको दर्ता प्रक्रिया फरक हुनुपर्ने प्रशिक्षक साउद बताउँछन् ।
विभिन्न जिल्लामा यस्ता फिटनेस सेन्टरहरू थुप्रै छन् । तर, संगठिन हुन नसक्दा यकिन तथ्यांक भने कतै छैन । राजधानीमा रहेका ७ सय फिटनेस सेन्टरमा एक हजारभन्दा बढी प्रशिक्षक रहेको अनुमान छ ।
डायटिङ गर्ने प्रचलन घट्दै
केही समयअघिसम्म स्लिम हुन, फिट रहन डायटिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता धेरैमा पाइन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो धारणा परिवर्तन हुँदै गएको छ । स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाका कारण डायटिङ गर्ने प्रचलन हट्दै गएको हो । पहिले खाना नखाएर स्लिम भइन्छ भन्नेहरू अहिले एक्सरसाइजमा ध्यान दिन थालेका छन् । बरु आफूले खाने खानाको क्यालोरीको हिसाब गरेर खाना खान थालेका छन् । मोटोपन बढ्नबाट जोगिन डाक्टरको सल्लाहमा शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व मिलाएर खानुपर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ अरूणा उप्रेती बताउँछिन् । ‘डायटिङ गर्नै हुँदैन’ उनी भन्छिन्, ‘डायटिङको चक्करमा प्रोटिन, भिटामिनको कमी हुन गई गम्भीर समस्या आउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो सन्तुलित खानामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
योगाले स्वस्थ एवं स्फूर्त बनाएको छ : डा. बाबुराम भट्टराई, संयोजक, नयाँ शक्ति
म प्रत्येक बिहान आधा घन्टा योगा तथा प्रणायाम गर्छु । योगाले मलाई स्वस्थ रहन एकदम ठूलो मद्दत मिलेको छ । योगाले मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्फूर्ति राख्छ । जोकोहीको जीवनमा स्वास्थ्यको सबैभन्दा महत्व हुन्छ । म आफ्नो स्वास्थ्यका लागि एकदम सचेत छु । अरूलाई पनि स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन आग्रह गर्छु । पहिलो नम्बरमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् । योगाले मेरो दैनिक जीवनलाई धेरै सहज बनाएको छ ।
सुगरको मात्रा थोरै बढी देखिएको हुनाले खानामा ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सुगर रोग लागेकाले खान नहुने खानाहरू सकेसम्म खाँदिनँ । खानाभन्दा तरकारी बढी खान्छु । खानासँग गेडागुडीको झोल अथवा दाल र साग खान रुचाउँछु । बिहान नास्ताभन्दा अलि कम खाना खान्छु । साँझको खानामा रोटी र तरकारी खान्छु । साँझ खाना नखाएको धेरै भयो । त्यस्तै परिस्थितिबाहेक खाने गरेको छैन । कतै जाँदा रोटी भएन भने तरकारी मात्रै खान्छु । साँझ खाना खाँदा आफैँलाई असहज अनुभव हुने भएकाले सकेसम्म खाँदिन ।
फिट रहन के गर्छन् नेपाली नायक–नायिका ?
सामान्यतया नायक–नायिका भन्नासाथ आकर्षक शरीर र सुन्दर अनुहार भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । स्लिम, अग्ली, गोरी, ठूलो आँखा, चुच्चो नाक भएकालाई फिल्म मेकरले समेत रुचाउने गर्छन् । यसको पछि लागेर नायिका तथा नवनायिकाले प्लास्टिक सर्जरीमार्फत चुच्चो नाक बनाउने, ओठ मिलाउने गरेको पाइन्छ । जिरो फिगर बनाउन उनीहरू हरपल प्रयत्नरत हुन्छन् ।
नायकहरू जिम गरेर सिक्स प्याक बनाउने होडमा छन् । उमेर, समय र परिस्थितिअनुसार उनीहरू जिम, योगा वा मर्निङवाक गर्छन् । नायिकाहरू जुम्बा, जिम र योगा गर्छन् । आजभोलि जिरो फिगर बनाउने वा स्लिम बन्ने होडमा खाना नै नखाने प्रचलन भने हट्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै यस्ता खालका अभ्यास भइरहेका छन् । त्यसले नेपाली नायक–नायिकाहरूमा प्रभाव नपार्ने कुरै छैन ।
यद्यपि नेपाली सिने नगरीमा जिरो फिगर भएका नायिका भनेर चिनिएको वा चर्चामा आएका कोही छैनन् । नायकहरूमा एक्सरसाइज गरेर एप्स बनाउने प्रचलन भने बिस्तारै बढिरहेको छ । गज्जबसँगको कुराकानीको क्रममा कतिले अभिनय मुख्य माने भने कतिले फिट शरीरको साथै सुन्दरतालाई महत्वपूर्ण ठाने । गत महिना वर्षा राउत ‘वेट घटाउन’ अस्ट्रेलिया गएको विषयले राम्रै चर्चा पायो । उनी मोटी भएकै कारण मुख्य रोल नपाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘जिरो फिगर चाहिँदैन फिट हुनुपर्छ’
जिरो फिगर नै हुनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ । फिटचाहिँ हुनैपर्छ । नायिका भइसकेपछि जस्तो रोलमा पनि अभिनय गर्न फिट हुनुपर्यो । कहिले फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले छमछमी नाच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि त हामी तयार हुनुपर्यो नि ।
सबै भूमिका सजिलै निभाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने हुन्छ । एक्सनको चरित्र आयो भने म सक्दिनँ भनेर छाड्नुपर्ने अवस्था नआओस् । म आफूलाई पनि त्यहीअनुसार फिट राख्ने कोसिस गरिरहेकी छु । फिट रहन हप्तामा चार दिन कार्डियो जाने गर्छु । स्वस्थ र ताजा खाना खाने कोसिस गर्छु । स्लिम हुन केही गरेकी छैन । डायटिङ गर्ने भनेर भोकै बस्दिनँ । एकदम डाइट मिलाएर खाना खान्छु । चिल्लो, तारेको, पिरो तथा मसलेदार खाना एकदम कम खान्छु ।
‘मलाई स्लिम होइन फिट रहनु छ’ – केकी अधिकारी, नायिका
नायिका भन्नेबित्तिकै दुब्लो, पातलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले दुब्ली देखिन हामी हरसम्भव प्रयास गर्छौँ । नायिका भनेको एकदम ‘स्लिम एन्ड थिन’ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी पनि ग्रसित छौँ । तर, म यो मान्दिनँ । आजसम्म प्रयास पनि गरेकी छैन । म दुब्ली देखिनुपर्छ, सुन्दर देखिनुपर्छ भनेर मनमा कहिल्यै पनि आएन । जहिले पनि म ‘क्यारेक्टर फोकस’ हुन्छु ।
आफूले निभाएको चरित्रलाई जीवन्त बनाउन हरसम्भव कसरत गर्ने गरेकी छु । हामी कलाकार भनेको पात्रलाई न्याय गर्न लक्षित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । म कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्दा चरित्रको आधारको रोल चाहन्छु । ग्ल्यामरस प्रस्तुत गर्ने खालको अभिनय मेरो रुचिको विषय होइन र गर्दिनँ पनि ।
कलाकारले आफूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा स्वयंमा भर पर्छ । कसले के भन्यो भनेर हुने होइन । अर्थात् मलाई मोटी भन्यो भनेर त्यसैको पछि लागेर आफू स्लिम बन्न खोज्ने होइन कि जस्तो छु ठीक छु भनेर बस्ने हो । वातावरण परिवर्तन हुँदैन, मानिसको स्वभावमा परिवर्तन हुने हो । त्यसैले म दुब्ली हुनुपर्छ भनेर भोकै बस्ने कहिल्यै पनि गरिनँ ।
आफूलाई फिट र स्वस्थ राख्न म सचेत छु । त्यसका लागि बिहान जुम्बा जाने, योगा गर्ने गरेकी छु । कहिलेकाहीँ व्यस्तताले यस्ता एक्सरसाइज गर्न पनि समय मिल्दैन । तर, सकेसम्म गर्छु । यसले मलाई स्फूर्ति राख्न मद्दत गर्छ । खानामा पनि कहिल्यै मोटाउँछु भनेर केही कुरा बार्ने गरेकी छैन । बरु अस्वस्थ हुन्छु कि भनेर चिल्लो, पिरोजस्ता खानेकुरा कम खान्छु ।
क्लबमा कडा एक्सरसाइज – निखिल उप्रेती, नायक
एक्सन हिरो निखिल उप्रेतीको शरीर हेर्दा चिटिक्क परेको देखिन्छ । उनी आफ्नो शरीरलाई कसरी मेन्टन गर्छन् भन्ने जान्न चाहने थुप्रै छन् । निखिल त्यसका लागि कडा परिश्रम गर्छन् । दैनिक दुई घन्टा कलिउड प्लानेट क्लबमा एक्सरसाइज गर्छन् । उनी आफू पहिल्यैदेखि खेलकुद क्षेत्रको भएकाले शरीर फिट हुन त्यसले पनि सहयोग गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘म तेक्वान्दो र उसुको खेलाडी हुँ । त्यसैले मेरो शरीर पहिलादेखि नै फिट छ ।’ एक्सरसाइजले मेडिटेसनको काम गरेको उनले बताए । कलाकार भएकाले समयको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भए पनि मिलाइरहेको उनी बताउँछन् ।
स्क्रिनका लागि थिन हुनुपर्छ – करिश्मा मानन्धर, अभिनेत्री
अहिले आफूलाई कस्तो बनाउने भन्ने आ–आफ्नो रोजाइको विषय हो । नायिका ‘जिरो फिगर’ भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता परिवर्तन हुँदै गएको छ । किनभने फिल्ममा नै अभिनय गर्ने नायिकाका लागि पनि कस्तो फिल्ममा अभिनय गर्ने भनेर छुट्टिएको छ । जस्तो ‘कमर्सियल’ गर्ने कि ‘फिचर’ फिल्म गर्ने भन्ने रोजाइ कलाकारको हातमा छ ।
कमर्सियल गर्नेले आफूलाई त्यहीअनुसार मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा कमर्सियल फिल्ममा काम गर्नेलाई आफ्नो फिगर मेन्टेन गर्नुपर्ने प्रेसर बढी हुन सक्छ । फिचर फिल्मका लागि जरुरी नहुन सक्छ । कलाकारका लागि मुख्य त अभिनय नै हो । यद्यपि स्क्रिनमा काम गर्दा स्लिम अथवा थिन नै ठीक देखिन्छ । दर्शकको पहिलो नजर त तपाईंको बाह्य रूपमा नै हुने हो ।
म पहिला आफूलाई मेन्टेन गर्न सधैँ सचेत रहन्थेँ । हामी चलचित्रमा अनिभय गर्नेका लागि आफैँ जज बन्ने अवसर पनि हुन्छ । हामीले गरेको हरेक काम स्क्रिनमा समय–समयमा हेर्छौँ । त्यसले आफ्नो अभिनय र शारीरिक रूपमा कस्तो देखिएको छ भनेर ‘जज’ गर्न सकिन्छ र यसले मेन्टेन गर्न सचेत पनि गराउँछ । स्क्रिनमा थिन नै राम्रो देखिन्छ । यसले गर्दा आफूलाई मेन्टेन गर्न एक्सरसाइज गर्ने गर्थेँ । तर, नायिकाको काम आफँैमा पनि एक्सरसाइज हो । नाच्नुपर्ने, छायांकनका लागि गाउँगाउँमा हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ । यसले नै एक्सरसाइज पूरा हुन्छ । पछिल्लो समयमा आएर भने एक्सरसाइज गर्ने समय मिलेको छैन । पार्टीको काम र स्कुलले गर्दा अफर आएका काम पनि गरेकी छैन । तर, आफूलाई फिट राख्न दैनिक हिँड्ने र सामान्य व्यायाम मात्रै गरिरहेकी छु ।
नायिकाको ज्यान राम्रो होइन, ‘अपिलिङ’ हुनुपर्छ – दीपाश्री निरौला, चलचित्र निर्देशक तथा कलाकार
मेरो परिचय नै मोटी दीपा भन्ने भइसकेको छ । शारीरिक बनावटकै कारणले अहिलेसम्म मेरो अभिनयमा नकारात्मक प्रभाव परेको छैन । किनभने मेरो नायकसँग पानीमा भिजेर नाच्ने उमेर पनि छैन । उमेरअनुसारको पात्रको भूमिकामा हुन्छु, यसले गर्दा मेरो शारीरिक बनावटले समस्या नभएको हो ।
मलाई चाहिने शारीरिक बनावट मेन्टेन गरेकी छु । स्लिम हुनुपर्ने उमेरमा त म पनि स्लिम नै थिएँ नि । हामी कलाकार भइसकेपछि रोल सुहाउँदो आफ्नो शारीरिक बनावटमा पनि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो पनि कलाकारमा हुनुपर्ने गुणमध्ये एक हो । मोडलको भूमिकामा अभिनय गर्नुपर्नेछ भने त्यसै रूपमा आफ्नो फिगर मेन्टेन गर्नुपर्छ । कलाकारले अभिनय गर्दा रोललाई ध्यानमा राखेर आफूलाई पनि त्यहीअनुसार चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ । ग्ल्यामरस फिल्डमा आफूलाई मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ । नायिकामा ‘अपिलिङ’ त हुनैपर्छ । त्यसका लागि शारीरिक बनावट महत्वपूर्ण हो ।
फिल्म क्षेत्रमा फिटनेसको महत्व छ: सरोज खनाल, अभिनेता
म आफूलाई मेन्टेन गर्न भरपूर प्रयास गर्छु । काठमाडौंमै भएको वेला बिहान जिम जाने गर्छु । जिम जाने समय नहुँदा घरमा नै योगा गर्छु । जसले मलाई स्वस्थ राख्नुका साथै फूर्ति कायम गर्छ । सबैले स्वास्थ्यका लागि व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने बुझिसकेका छौँ । र, गर्छन् पनि । कलाकार विशेषगरी स्वस्थ मात्र नभएर शारीरिक रूपमा आकर्षक पनि हुनुपर्छ । मेरो दैनिक व्यायामदेखि लिएर खाना खाने परम्परामा पनि परिवर्तन भएको छ ।
हामीले आफ्ना लागि मात्र नभएर हामीलाई माया गर्नुहुने दर्शकका लागि पनि आफूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो उमेरअनुसार जिउलाई फिट राख्न कोसिस गर्नुपर्छ । पहिला आफूलाई मेन्टेन गर्न आजभोलिको जस्तो जिम सेन्टरहरू थिएनन् । रंगशालामा गएर एक्सरसाइज गर्नुपथ्र्यो । आजभोलि जिम सेन्टर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँहरूमा खुलेका छन् । सजिलो भएको छ ।
जिरो फिगरको चक्करमा लाग्नु बेकार : सञ्चिता लुइँटेल, नायिका
म सुरुदेखिकै जिरो फिगरवाली होइन । जिरो फिगर बनाउन प्रयास पनि गरिनँ । म नायिका ‘ब्युटी विथ ब्रेन’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । नेपाल तथा छिमेकी देश भारतमै पनि जिरो फिगर भएर हिट भएको इतिहास छैन ।
त्यसले गर्दा यो कमर्सियल क्षेत्रमा जिरो फिगर हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, अभिनयमा जोड गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । स्वास्थ्यका लागि आफ्नो शारीरिक बनावटलाई फिट राख्नु जरुरी छ । स्वस्थ तथा फिट भइयो भने नै काममा पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सकिन्छ । त्यसैले जिरो फिगरको चक्करमा खाना नखाने, आवश्यकताभन्दा बढी एक्सरसाइज गर्ने हुनुभएन । क्यारेक्टरअनुसार आफूलाई ढाल्न सक्नु राम्रो ।
नेपालमा क्यारेक्टरअनुसार शारीरिक रूपमा परिवर्तन ल्याएको कुराको खासै मूल्यांकन हुँदैन । किनभने मैले नै पनि ‘नाइँ नभन्नु ल चार’ र ‘राधा’ चलचित्रका लागि क्यारेक्टरअनुसारको शारीरिक बनावटमा परिवर्तन गरेकी थिएँ । आफ्नो शरीरलाई सधैँ एउटै तौलमा मेन्टेन गर्न सक्नु पनि खुवी हो । यो खुवी कमैमा हुन्छ । गर्न सके राम्रो । गर्भवतीको समयमा मेरो वजन एकदम बढेको थियो । पछि घट्यो । खाना मेन्टेन गरेँ, एक्सरसाइज गरेँ । अहिले पनि आफूलाई स्वस्थ राख्न नियमित एक्सरसाइज गर्छु । डाइट मेन्टेन गरेर खाने गरेकी छु । डाक्टरको सल्लाहअनुसार मेरो अहिलेको शारीरिक तौल ठीक छ । अहिले मेरो तौल ५४ केजी छ । यसैलाई मेन्टेन गर्ने कसरतमा छु ।
स्लिम हुन जरुरी छ : स्वस्तिमा खड्का, अभिनेत्री
नायिका भन्नासाथ जे लगाउँदा पनि सुहाउने किसिमको शारीरिक बनावट भएको हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको अभिनय हो, तर अभिनय मात्र भएर पनि हुँदैन । त्यहीअनुसारको शारीरिक बनावट पनि हुन जरुरी छ । मैले आफूलाई फिट राख्न आजसम्म केही गरेकी छैन । म जे छु सबै न्याचुरल हो । खानामा पनि यो खाँदिनँ, त्यो खानुपर्छ भन्ने छैन । सकेसम्म ताजा खाना खान्छु । अहिलेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको वर्कआउट पनि गरेकी छैन ।
नायिकालाई स्क्रिनमा देख्दा फिट देखिनुपर्यो । शारीरिक बनावटकै आधारमा उसको अभिनयको क्षमतालाई समेत बेवास्ता गर्नुभएन । तर, उसको भूमिकाअनुसारको शारीरिक बनावट भएन भने फेरि पनि उसको अभिनय क्षमताले मात्र केही हुँदैन । त्यसैले आफ्नो अभिनयसँगै शारीरिक फिटनेस पनि गर्न जरुरी छ । दर्शकले अभिनयसँगै कलाकारको ‘लुक्स’मा पनि जीवन्त खोज्नुहुन्छ । दर्शकको मन जित्न पनि हामीले आफूलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ । फेरि यो क्षेत्र भनेकै ‘सोबिज’ हो । फिगर फिटनेस त मेन्टेन गर्नैपर्छ ।
स्लिम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ : दयाहाङ राई, अभिनेता
रुटिन बनाएर व्यायाम गर्ने समय नभएकाले गरेको छैन । एक–दुई दिन ग¥यो फेरि छुट्यो भइरहेको छ । निरन्तरता दिन पाइरहेको छैन । समय मिलेसम्म रनिङ जाने र जिम जाने हुन्छ । तर, कहिले कार्यक्रमले, कहिले सुटिङले निरन्तरता दिन सकेको छैन ।
सेतो सूर्य, दासढुंगा, कर्कसलगायतको चलचित्रमा पात्रअनुसारको मेरो शारीरिक बनावटमा परिवर्तन गरेको छु । यो चलचित्र गर्दा मैले धेरै एक्सरसाइज गरेर ज्यान घटाएको छु । मैले गर्ने चलचित्रको पात्र नै त्यस्तो अर्थात् मोटो ज्यान भएको हुने हुँदा ज्यान घटाउनु परेको छैन । कतिपय पटकथाको पात्रअनुसार म फिट भएको छु भने कतिपय मेरो ज्यान हेरेर पटकथा लेखिने भएकाले घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छैन । अवस्था आए म घटाउन तयार छु ।
म आफ्नो स्वास्थ्यप्रति खासै सचेत छैन । समय दिन भ्याएको छैन । सबैजना स्वास्थ्यको हिसाबले फिट र स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर, राम्रो देखिन स्लिम हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ म मान्दिनँ । म त्यो धारको मान्छे परिनँ । तर, कहिलेकाहीँ कथाले मागेजस्तो आफ्नो शरीरको बनावटमा परिवर्तन भने ल्याउनुपर्छ । मोटो मान्छे स्वस्थ हुन्न भन्ने पनि होइन । त्यसैले कलाकार मात्र नभएर सबै मानिस स्वस्थ हुनुपर्छ ।
आफूलाई टिकाउन फिट हुनुपर्छ : वर्षा सिवाकोटी, अभिनेत्री
केही समयअघि म जिम जाने गर्थेँ । अहिलेचाहिँ ‘सेप अप’मा जान थालेकी छु । यो एक किसिमको थेरापीजस्तै हो । थेरापीको माध्यमबाट फ्याट घटाउँछ । स्ट्रिक डाइटमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
फिल्मकै सुटिङका लागि लोमाथांका करिब चालीस दिन बसेँ । त्यहाँ जे उपलब्ध छ त्यही खाने गर्दा मोटाएकी थिएँ । फेरि फिल्मकै लागि घट्नुपर्ने भएर यसो गर्न थालेकी हुँ । जिम जाँदा अलि बढी समय लाग्ने भएकाले सेप अप रोजेँ ।
यो फिल्ड नै ग्ल्यामर भएकाले स्लिमभन्दा पनि फिट हुनैपर्छ । पात्रको चरित्रअनुसारको फिल्म गर्दा शारीरिक बनावटले खासै असर गर्दैन । तर, त्यस्तो फिल्म नेपालमा कमै मात्र बन्छ । बने पनि नायकलाई मुख्य रोल दिइन्छ र नायिका स्लिम नै खोजिन्छ । यहाँ नायक पात्र पुरुषलाई बनाइन्छ । जस्तो दयाहाङ राई तथा सौगात मल्ललाई हेरेर पटकथा तयार गरिन्छ, तर कुनै वर्षा सिवाकोटी वा अरू कोही महिला कलाकारलाई हेरेर पटकथा लेखिँदैन ।
आफूलाई यो फिल्डमा अलि लामो समय टिकाउन फिट हुनैपर्छ । स्लिमभन्दा पनि फिट रहनु आवश्यक छ । नायक, नायिका, निर्देशक या सर्वसाधारण जोकोही पनि फिट हुनुपर्छ । तर, नायिकाको सवालमा फिल्मकै लागि भए पनि स्लिम हुनुपर्ने अवस्था छ । नायिकालाई सहायक पात्रकै रूपमा लिने भएकाले हामीले आफूलाई स्लिम राख्नैपर्ने बाध्यता छ ।
मोटो मान्छे पनि स्वस्थ हुन्छ: प्रियंका बोचा, बमनिया सञ्चालक
वमनिया भनेको प्लस साइज महिलाका लागि लक्षित रेडिमेड कपडा पसल हो । वमनियाले प्लस साइज महिलाको सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजना गरिरहेको छ । फेब्रुअरी १ मा यसको फाइनल हुनेछ । ‘सुपर प्लस साइज नेपाल २०१८’ प्रतियोगिताको नाम दिएका छौँ ।
हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको प्लस साइज भएका महिलाको क्षमता अरूभन्दा कम हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु हो । मोटो शरीर भएकै कारण समाजमा अप्ठ्यारो स्थिति हुनुहुँदैन, उनीहरू पनि प्रेरणाको स्रोत हुन्, मोटो मान्छे भन्नेबित्तिकै अस्वस्थ हुन्छन् भन्ने सोचाइ गलत हो भन्ने सन्देश यस कार्यक्रमले दिनेछ ।
मोडलिङ फिल्डमा दुब्लो हुनुपर्छ: माल्भिका सुब्बा, पूर्वमिसनेपाल
नेपालमा जिरो फिगर भएका नै हुनुपर्छ भन्ने ट्रेन्ड छैन मैले बुझेसम्म । तर, सकेसम्म दुब्लो हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताचाहिँ पक्कै पनि छ । फिल्म लाइनमा अलि मोटो शरीर भएकाले रोल नपाउने अथवा फिल्म नपाउने सम्भावना हुन्छ । तर, त्यो ट्रेन्ड पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । हुन त कथाले पनि फरक पार्ला । रेखाजी, वर्षा राउत त्यस्तो स्लिम ज्यान भएको नायिका नभए पनि चर्चित हुन् । उनीहरूले आफ्नो अभिनयक्षमताले नै आफ्नो पहिचान बनाए । मोटो शरीरकै कारण कुनै पनि कलाकारको क्षमतालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन ।
कमर्सियल फिल्मले चाहिँ दुब्लो नै खोज्छ । मोडलिङ तथा फेसन सोका लागि त दुब्लो, पातलो नै हुनुपर्छ । क्यामेराका लागि भए पनि दुब्लो चाहिन्छ । क्यामेरामा दुब्लो ज्यान भएकालाई नै राम्रो देखिन्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा मात्र नभएर विश्वकै ग्ल्यामर फिल्डमा यस्तो मान्यता राखिन्छ । त्यही मान्यतालाई नेपालले पनि पछ्याउने भएकाले दुब्लो त हुनैपर्छ ।
फिजिकल्ली आकर्षक हुनैपर्छ : रमेश उप्रेती, अभिनेता
म आफूलाई स्वस्थ एवं फिट राख्न हरेक दिन व्यायाम गर्छु । खानाको ब्यालेन्स मिलाउँछु । खाना कम–कम तर दिनको ६ पटकसम्म खान्छु । खानेकुराहरू यो खान्छु, त्यो खान्छु भन्ने हुँदैन । एकदम मात्रा मिलाएर खान्छु ।
आफ्नो शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व पुगोस् भन्ने ख्याल गरेर खाना खान्छु । स्वस्थ एवं ताजा खानेकुरा खाने कोसिस गर्छु । हामी कलाकार भनेको धेरै फ्यानको आइडल हुन्छौँ । उहाँहरू कतिले आफूलाई हामीजस्तै बन्न रहर गर्ने र कोसिस पनि गर्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले आफूलाई आकर्षक राख्नैपर्छ । कलाकारिता क्षमता त त्यसै निखार्नैपर्ने हुन्छ, साथमा फिजिकल्ली आकर्षक पनि हुनैपर्छ । म यो मान्यता राख्छु । यी दुवैमा हामी अत्यन्त सचेत हुन जरुरी छ ।
उदाहरणका लागि तपाईंको कुनै फिल्म हलमा चलिरहेको छ भने सुरुमा फिल्म हेर्न लोभ्याउने त पोस्टरमा भएको तपाईंको व्यक्तित्व नै हो । हलसम्म गएपछि तपाईंको अभिनयक्षमता देख्ने हो । त्यसैले मेरो मान्यता भनेको कलाकारले क्षमतासँगै आफ्नो बाह्य सुन्दरतालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
नायक–नायिका दुब्लो, पातलो हुनुपर्छ : ऋषि लामिछाने, निर्देशक
चलचित्रमा कस्तो शरीर भएको वा अनुहारलाई नायिका बनाउने भन्ने कुरा कथाले निर्धारण गर्छ । म कथामै आधारित रहेर कस्तो नायिकालाई कुन रोल फिट हुन्छ त्यहीअनुसार लिन्छु । त्यस्तै, आफूले रोजेको नायिकाले कथामा भएको पात्रको भूमिकालाई जीवन्त बनाउन सक्छिन् कि सक्दिनन् त्यो पनि हेर्छु । म मात्र नभएर जो–कोही निर्देशकले यही गर्छन् सायद । कथामा नाच्ने, गाउने अथवा मोडलजस्तो पात्र खोजेको भए म त्यहीअनुसार नायिका खोज्छु । तर, सबै फिट भने हुनुपर्छ ।
हामीले विश्वमा चलिआएको मान्यतालाई पछ्याउने हो । विश्वले ग्ल्यामरस फिल्डमा मानेको सुन्दरता भनेको दुब्लो, पातलो अग्लो र अनुहार पनि सुन्दर हो । हामीले त्यसैलाई पछ्याइरहेका हौँ । व्यावसायिक चलचित्रमा बढी यस्तै प्रयोग हुन्छ । अपवादबाहेक । सुन्दरताले जोकोहीलाई आकर्षण गर्छ । दुब्लो हुनु भनेको स्वस्थ हुनु पनि हो । मेरो मान्यताअनुसार निर्देशक, नायक, नायिका सबै स्वस्थ हुनुपर्छ । तर, मैले भने आफूलाई फिट राख्न सकिरहेको छैन । कोसिस गरिरहेको छु ।
‘लार्जर देन लाइफ’ चलचित्रमा बाहिरी आवरणले महत्व राख्छ : दीपेन्द्र के खनाल, निर्देशक
कुनै पनि चलचित्रको कलाकार लिँदा स्क्रिप्ट हेरेपछि मेरो दिमागमा कस्तो स्केच बन्छ त्यस्तै कलाकार खोज्छु । चलचित्र दुईखालको ‘यथार्थनजिक’ किसिमको र ‘लार्जर देन लाइफ’ किसिमको । जुन किसिमको चलचित्र हो त्यस्तै पात्रको चयन हुन्छ । चलचित्रमा कलाकार छान्दा कुन कलाकारले यो पटकथाको पात्रलाई न्याय गर्न सक्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । उसको बाह्य आवरणले महत्व राख्दैन । तर, लार्जर देन लाइफवाला चलचित्रमा भने कलाकारको क्षमतासँगै बाह्य आवारण अथवा शारीरिक बनावटले महत्व राख्छ । पात्रलाई जीवन्त बनाउन सक्ने क्षमता मात्रै भएर हुँदैन, शारीरिक रूपमा पनि फिट हुनुपर्छ । फिजिकल फिटनेस भएका कलाकारको प्रस्तुति नै फरक हुन्छ ।
शारीरिक आकारभन्दा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो : प्रशान्त ताम्राकार, कोरियोग्राफर/कलाकार
आफूलाई फिट तथा स्वस्थ राख्न नियमित एक्सरसाइज गर्नुका साथै खानामा ब्यालेन्स मिलाउने गरेको छु । शारीरिक रूपमा फिट रहनभन्दा पनि स्वस्थ रहन सचेत छु । नियमित व्यायामले मलाई स्वस्थ्य रहन सहयोग गर्छ । त्यससँगै स्वास्थ्य एवं ताजा खाना खान्छु । कलाकार शारीरिक रूपमा फिट रहन खोज्नुभन्दा स्वस्थ रहन जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।
सबै मोटा मान्छे अस्वस्थ हुन्छन् भन्ने होइन । मोटो शरीर भए पनि स्वस्थ छन् भने उनीहरू पनि फिट नै हुन् भन्ने लाग्छ । आफ्नो उचाइअनुसारको तौल राख्नुचाहिँ राम्रो हो । कलाकारले आफ्नो शरीर बनाउने भनेको अवस्थाअनुसार हो । तर, स्वास्थ्य भनेको एकपटक बिग्रिएपछि फेरि पहिलाको जस्तो नहुन सक्छ । त्यही भएर शरीरको आकार बनाउनेभन्दा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
मोडलिङ फिल्डमा पनि अब बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा ‘प्लस साइज मोडलिङ सो’हरू हुन थालेको छ । त्यसैले स्लिमभन्दा पनि तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । मैले चलचित्र ‘सम्बोधन’ गरेपछि ‘ऐश्वर्य’ चलचित्रमा काम गर्न करिब १८ केजी तौल घटाएको छु । यो हामी कलाकारका लागि आवश्यक पनि हो ।
‘आउटडोर’भन्दा ‘इनडोर’ एक्सरसाइज बेस्ट : ननिता महर्जन, बडिबिल्डर तथा जिम इन्स्ट्रक्टर
प्याराडाइज फिटनेस सेन्टर कलंकी
आजभोलि स्वास्थ्यप्रति पहिलाको तुलनामा सजगता बढेको छ । आफूलाई स्वस्थ राख्न विभिन्न किसिमका एक्सरसाइज गर्नेहरू छन् । सबै जिम सेन्टरमा नै जानुपर्छ भन्ने छैन । बिहान–बिहान विभिन्न पार्कहरूमा एक्सरसाइज गर्ने, योगा गर्ने, दौडनेहरूको भिड देखिन्छ । मेरो बुझाइमा एक्सरसाइज सडकमा अथवा खुला चउरमा गर्नुभन्दा जिम सेन्टर वा एक्सरसाइज क्लबमा गएर गर्नु उत्तम हुन्छ । किनभने अहिले उपत्यकाको वातावरण एकदम प्रदूषित छ । हामी स्वास्थ्यलाई फाइदा होस् भनेर जाँदा झनै असर पर्ने सम्भावना बढी छ । उपत्यकामा खुला ठाउँमा बसेर एक्सरसाइज गर्न मिल्ने ठाउँ सायदै होला । मर्निङवाक मात्रै गर्नुहुन्छ भने पनि क्लबमा गएर ट्रेडमिल तथा साइक्लिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । मेरो अनुभवमा चाहिँ आउटडोर भन्दा इन्डोर एक्सरसाइज बेस्ट हुन्छ ।
वाकले मात्रै पुग्दैन
शरीरलाई फिट राख्न यही एक्सरसाइज बेस्ट हुन्छ भन्न सकिन्न । सबै एक्सरसाइज बुझेर गर्दा फाइदाजनक नै हुन्छ । जस्तो जुम्बा, एरोबिक, जिम आदि । तर फेरि वाकले मात्र चाहिँ केही हुँदैन । हिँडेर शरीरको कति क्यालोरी घट्छ र ? तपाईं आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने बिहान अथवा साँझ कम्तीमा एक घन्टा कार्डियो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा ट्रेडमिल, स्किपिङ, साइक्लिङ, क्रस ट्रेनरजस्ता एक्सरसाइजहरु पर्छन् । सेन्टर अथवा क्लब जानेबित्तिकै एकदम हेभी एक्सरसाइज गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आवश्यकताअनुसार हल्का एक्सरसाइज गरे मात्र पनि हुन्छ । एक्सरसाइजसँगै खानाको मात्रा र गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
दैनिक एक घन्टा दिउँ
आजभोलि धेरैजसो कामकाजी नै हुन्छन् । क्षेत्रअनुसार व्यस्त भइन्छ । आफैँले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कोही बिहानदेखि साँझसम्म नै व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ । तर, जति व्यस्त भए पनि कम्तीमा आफूलाई दैनिक एक घन्टा समय दिनुपर्छ । किनभने हाम्रो स्वास्थ्य नै हो सबैकुरा । स्वस्थ भइएन भने के गर्न सक्छौँ र ? सकेसम्म बिहानको समयमा एक्सरसाइज गर्नु राम्रो हुन्छ । बिहान एक्सरसाइज गर्दा दिनभर आफूलाई फ्रेस अनुभव हुन्छ । दिनभरको काम स्फूर्तिका साथ गर्न सकिन्छ । बिहान समय मिलेन भने साँझ भए पनि एक घन्टा आफूलाई दिनुहोस् । जीवनमा स्वास्थ्यजत्तिको महत्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन ।
सेलिब्रेटीको फिटनेस मोह
दिनहुँ दुई घन्टा एक्सरसाइज : कोमल वली, राजनीतिकर्मी
कलाकार तथा राजनीतिकर्मी कोमल वली दिनहुँ एक्सरसाइज गर्छिन् । उनी कहिले जावलाखेलको शालिकग्राम हेल्थ क्लब त कहिले इन्टरनेसनल हेल्थ क्लब जाने गर्छिन् । एक्सरसाइजले आफूलाई पुनर्ताजगी दिने उनको भनाइ छ ।
उनी दैनिक ढेडदेखि दुई घन्टासम्म एक्सरसाइज गर्छिन् । जसकारण आफू स्वस्थ रहनुका साथै शारीरिक तौलसमेत मेन्टेन भएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘एक्सरसाइजले मानिसलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।’ उनी अहिले ५९ केजी छिन् । उमेर बढ्दै गएपछि स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डेढ घन्टा पसिना निकाल्छु: कुबेर सिंह राना, पूर्वआइजी
३० वर्ष प्रहरी सेवामा काम गरेका पूर्वआइजी कुबेर सिंह रानाले अहिले अवकाश जीवन बिताइरहेका छन् । प्रहरी सेवामा शारीरिक स्फूर्तिको निकै महत्व रहने भएकाले सेवा अवधिमा धेरै शारीरिक व्यायाम गर्नुपरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘दैनिक व्यायाम पहिलो नम्बरमा हुन्थ्यो । तर, जागिरको उत्तराद्र्धतिर अढाई वर्षजति शारीरिक व्यायाम गर्न पाइएन ।’ त्यसवेला अन्य काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले दैनिक व्यायाममा समय दिन नपाएको उनी बताउँछन् । तर, सेवाबाट अवकाश पाएपछि उनले नियमित व्यायाम गर्न थालेका छन् ।
उनी हप्ताको तीन दिन पुलिस क्लबमा गएर जिम गर्छन् र बाँकी चार दिन मर्निङवाकमा जान्छन् । भन्छन्, ‘क्यालोरी नापेर त गर्ने होइन, तर जे गर्दा पनि पसिना निकाल्ने गरी गर्छु । कम्तीमा डेढ घन्टा पसिना निकाल्छु ।’
एक घन्टा स्वास्थ्यलाई: रामहरि खतिवडा, कांग्रेस नेता
रामहरि खतिवडा युवा नेता हुन् । ४० कटेका अविवाहित नेता खतिवडा स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत छन् । उनी दैनिक एक घन्टा कडा एक्सरसाइज गर्छन् । बिहान ५ बजे उठेर मनतातो पानी पिएपछि उनी एक्सरसाइजका लागि निस्कन्छन् । उनी ६ बजे घरबाट जगिङ गर्दै ¥याडिसन होटेल जाने गरेका छन् । त्यहाँ आफूले एक घन्टा एक्सरसाइज गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्वास्थ्यले तँ मलाई एक घन्टा दे, म तँलाई तेइस घन्टा दिन्छु भन्छ भन्ने भनाइ छ । त्यहीअनुसार मैले एक घन्टा दिँदै आएको छु ।’ उमेर बढ्दै गएपछि स्वास्थ्यप्रति झनै सचेत हुनुपर्ने उनको अनुभव छ ।
बिहेपछि रोटी खान थालेँ : प्रदीप पौडेल, युवा नेता
कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल पछिल्लो समय आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत छन् । सुरुमा स्वास्थ्यलाई त्यति महत्व नदिने पौडेल विवाहपछि श्रीमतीका कारण स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन थालेका हुन् । भन्छन्, ‘राजनीतिमा लागेकाले आफ्ना लागि समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ । तर, पछिल्लो समय भने श्रीमतीका कारण स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन थालेको छु ।’
आफू स्वस्थ्य रह्यो भने जुनसुकै काममा पनि सफल हुन सक्छौँ भन्ने भावनाले स्वास्थ्यलाई महत्व दिइरहेको उनले बताए । भन्छन्, ‘म एकदम भातप्रेमी हो, तर आजभोलि श्रीमतीको दबाबमा साँझ रोटी खान थालेको छु ।’ कहिलेकाहीँ समय मिलेको खण्डमा एक्सरसाइजसमेत गर्ने गरेको उनले बताए ।
योगाका कारण फिट छु: रामकुमारी झाँक्री, एमाले नेतृ
एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री स्वास्थ्यबारे सचेत रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘स्वस्थ रहन योगा गर्ने गरेकी छु ।’ योगाले शरीर फिट राख्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको अनुभव छ ।
रामकुमारीको विचारमा बाटोमा मर्निङवाक गर्नुभन्दा घरमा नै एक्सरसाइज गर्नु राम्रो हुन्छ । हालसम्म क्लब गएर एक्सरसाइज नगरेकी उनी समय मिलेसम्म घरमा नै पसिना बग्ने गरी एक्सरसाइज गर्ने बताउँछिन् । उनी खानामा कन्ट्रोल भने गर्न सक्दिनन् । ‘खाना मीठो भयो भने धेरै खाइहाल्छु जसकारण मोटोपनलाई घटाउन सकेकी छैन,’ उनी भन्छिन् ।
दैनिक ८५ पटक पुलअप : पशुपतिशमशेर जबरा, नेता, राप्रपा प्रजातान्त्रिक
उमेर धेरै भए पनि पशुपति शमशेर जबरा अझै पनि शारीरिक रूपमा फिट छन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष जबरा दैनिक ८५ पटक पुलअप गर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘म उकालो, तेर्सो हिँड्नुका साथै ८५ पल्ट पुलअप गर्छु ।’
नियमित एक्सरसाइजले शरीरलाई फुर्ती बनाउनुका साथै मस्तिष्कलाई समेत फ्रेस बनाउने उनको भनाइ छ । ‘धेरै खाना खानु स्वास्थ्यका लागि बेफाइदा हो’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले म खाना एकदम कम र सागसब्जी धेरै खाने गर्छु ।
फुर्सद हुँदा जिमखाना: योगेश भट्टराई, एमाले सचिव
एमाले नेतामध्ये सधैँ फिट देखिने नेता हुन्, योगेश भट्टराई । उनी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत छन् । राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई खासै फुर्सद नहुने भए पनि उनी एक्सरसाइजका लागि जसरी पनि समय मिलाउँछन् । यसरी उनी दैनिकजसो जिमखानासम्म पुग्छन् । योगेश दैनिक शारीरिक व्यायामका लागि समय निकाल्छन् ।
नारायणहिटीमा रहेको वाइल्डनेस क्लबमा उनी व्यावसायिक जिम प्रशिक्षकसँग प्रशिक्षण लिन्छन् । बडी बनाउनभन्दा शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न आफू जिमखाना धाउने गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जिम गएपछि शरीर फूर्तिलो हुने मात्र होइन, स्टामिना पनि बढ्छ ।’ काठमाडौंबाहिर हुँदा उनी मर्निङवाक गर्छन् ।
खानाभन्दा व्यायाम आवश्यक: डा. सुनील पौडेल, योगा नेचुरोप्याथी एन्ड क्रोनिक ब्याक पेन एक्सपर्ट
मानव शरीर भनेको मेसिनजस्तै हो । मेसिनलाई तेल लगाएर मात्र हुँदैन, नियमित मर्मत, सम्भार पनि गर्नुपर्छ । साथै चलाउनुपर्छ । लामो समयसम्म चलाएन भने मेसिनरी चिज काम लाग्ने हुँदैन । त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरलाई पनि चलाइरहनुपर्छ ।
त्यसका लागि नियमित व्यायाम गर्न जरुरी छ । खानाभन्दा जरुरी हाम्रा लागि व्यायाम हो । व्यायाम पनि हाम्रो शरीरको प्रकृति हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हामीले गर्ने कामको प्रकृतिले पनि फरक पार्छ । त्यसले गर् हामी एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अघि चिकित्सकको सल्लाह लिएर जाँदा एकदम राम्रो हुन्छ । त्यसले हामीलाई कुन एक्सरसाइजले फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । योगा, जिम, जुम्बा, एरोबिकजस्ता व्यायामले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ एवं स्फूर्ति राख्छ । व्यायाम गर्नुअघि एक्सपर्टको सल्लाहमा गर्नुपर्छ । नियमित व्यायामले सुगर, प्रेसरको औषधि खानेहरूमा औषधि नखानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर, डाक्टरको सुपरभिजनमा रहेर व्यायाम गर्नुपर्छ ।